गुगलले प्रयोगकर्ताले सर्च हिस्ट्री मेटाउन के गर्ने त? | सिमान्तMarginal गुगलले प्रयोगकर्ताले सर्च हिस्ट्री मेटाउन के गर्ने त? – सिमान्तMarginal
गूगलले प्रत्येक प्रयोगकर्ताको सर्च हिस्ट्री, प्रोफ़ाइल, लगायतका गतिविधिहरु नौ महिना सम्म स्टोर गरेर राख्छ र कुनै शक्तिशाली निकाय, अमेरिकी सरकार आदिले मागेमा त्यो रेकर्ड बुझाइ दिन्छ। अझ रमाइलो कुरा त के छ भने खुल्ला बजार प्रतिस्पर्धामा चलेको हुन्छ, एकाधिकार हुन्छ भनेर धेरै सिस्टर अर्गनाइजेशनका एउटै कम्पनीको मातहतमा रहन दिइन्न, तर सबै कुराबाट गूगल अपवाद छ।
यसले राखेको सूचनालाई मानिसहरु आधिकारिक मान्छन, केहिदिन अघि नेपालको सगरमाथालाई चीनको तिव्वतमा पर्छ भनेर सूचंना हाल्यो, सामाजिक संजालमा त्यसको प्रतिवाद भयो, चीनकी मुइ चूनले फेसबूकमा स्टाटस हालेपछि भाइरल नै भयो, त्यसको केहि दिनमा त्यसलाई केदिनमा सच्च्याएर नेपालमै रहेको भन्ने सूचंना आयो। चीनमा अहिले पनि गूगल प्रतिवन्ध छ। उनीहरु आफ्नै चिनिया सर्च इञ्जिन प्रयोग गर्छ। पडनुहोस कसरि सर्च हिस्ट्री मेटाउने भनेर-
गुगलमा सर्च गरेको शब्द गुगलले सेभ गर्छ भन्ने कुराले तपाइँलाई टाउको दुःखेको छ? यसलाई कसरी हटाउने भन्ने विषय विश्वभरिकै गुगल प्रयोगकर्ताका लागि एउटा रोचक विषय हो। मान्छेहरु गुगलसँग आफ्नो धेरै निजी सूचना नहोस् भन्ने कुरा चाहन्छन्। किन कि गुगलले तपाइँको सर्च हिस्ट्रीलाई ९ महिनासम्म स्टोर गरेर राख्ने गर्छ।
यदि तपाइँ बिङ ब्राउजर प्रयोग गर्नुहुन्छ भने माइक्रोसफ्टको नियमअनुसार तपाइँको सर्चहिस्ट्री १८ महिनासम्म सेभ हुन्छ। विकेपेडियाका अनुसार गुगलमा प्रत्येक दिन ३०० करोडभन्दा बढी पटक सर्च गरिन्छ। स्मार्टफोनको संख्या बढ्दै गइरहेको अवस्थामा गुगल सर्चका प्रयोगकर्ता पनि अझै बढ्दैछन्। मोबाइलबाट गरिने सर्च, युट्युब भिडियोमा सर्च गर्नेहरु बढ्दै जाँदा गुगल सर्चका प्रयोगकर्ता अझ बढ्दैछन्। यदि तपाइँले डिसेबल गर्न दिइएको विकल्प प्रयोग गर्नुभएन भने गुगगल वेब एन्ड एप हिस्ट्रीलाई सबै सर्चको जानकारी स्टोर गरेर राख्नेछ।
गुगलले यसको प्रयोग तपाइँको एउटा प्रोफाइल बनाउने कामका लागि प्रयोग गर्छ। अमेरिकी सरकार वा त्यस्तै शक्तिशाली निकायले माग गरेको खण्डमा गुगलले तपाइँको त्यो व्यक्तिगत प्रोफाइल सरकार वा राज्यका निकायलाई उपलब्ध गराउँदैन भन्ने कुराको कुनै निश्चिय हुँदैन। यदि एउटै आइपी एड्रेसबाट विभिन्न किसिमका सर्च हुन्छन् भने त्यो प्यार्टन हेरेर कसैको पहिचान सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ।
गुगलले ९ महिनासम्म सर्च हिस्ट्री राख्ने पोलेसी केही अगाडि मात्रै बनाएको हो। यदि तपाइँले २००५ देखि एउटै गुगल अकाउन्ट चलाउँदै आउनुभएको छ भने गुगगले तपाइँको सबै पुरानो हिस्ट्री समेत सेभ गरेको हुनेछ।
आफ्नो गुगल अकाउन्ट लग इन गर्नुहोस् र हिस्ट्रीमा जानुहोस्। त्यहाँ ड्रपडाउन मेन्यु देखिनेछ। त्यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाइँ आफ्नो सर्चलाई आर्काइभ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँलाई सो कुरा डिलिट गर्नुछ भने गगल अकाउन्ट लग इन गर्नुहोस् र वेब एन्ड एपमा जानुहोस्। त्यहाँ गएर गियर आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि रिमुभ आइटमको अप्सन चुन्नुहोस्। यसले तपाइँको गुगल सर्च हिस्ट्री डिलिट गर्नेछ।
समाचार श्रोत: नागरिक न्यूज २०/०४/२०१६
Previous Postयो ग्लोबलाइजेशनको यूग हो, नेपाल ग्लोबलाइज्ड हुन पाउने कि नपाउने?Next Postवेलायती जनतालाई ओबामाको धम्कि (?)